नेपालगन्जको चुनावी रथ हाँकेका डा. कनोडिया – sunpani.com
सुनपानी । १४ जेष्ठ २०७९, शनिबार मा प्रकाशित
देश संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि पहिलोपल्ट स्थानीय तहको चुनाव हुँदै थियो २०७४ सालमा। करिब २० वर्ष रित्तिएका स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि बन्ने र बनाउनेहरूको उत्साह उत्तिकै थियो।
देशका ७५३ पालिकामध्य पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक सहर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामाथि पनि सबको नजर थियो।
यहाँ नेपाली कांग्रेसले डा. सुरेशकुमार कनोडियालाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको थियो। चुनाव भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार धवलzमशेर राणा फेरि एकपटक मेयर भए।
पराजित भएका कनोडिया आफ्नो मेलोमा फर्किए। नेपालगन्ज मेडिकल कलेज उनको मूल व्यावसायिक थलो थियो। पश्चिम नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनको योगदानको चर्चा अर्को एउटा पाटो हो।
फेरि पाँच वर्ष बित्यो। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकियो। अघिल्लोपटक चुनावमा होमिइसकेका डा. कनोडिया फेरि आकांक्षी थिए।
तर राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको थियो। उनी उम्मेदवार भएनन्। सत्ता साझेदार दलहरूले यसपालि स्थानीय तहमै गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नेगरी सहमति गरेको थियो।
गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवारी त कांग्रेसले नै पाएको थियो तर पात्र कनोडिया भएनन्, कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट मेयरका उम्मेदवार भए।
आकांक्षा त पूरा भएन तर डा. कनोडियाले चित्त दुखाएनन्, राजनीति यस्तै हुन्छ। त्यो पनि अझ पार्टीकै जिम्मेवार पदमा भइसकेपछि कतिपय अवस्थामा ‘चित्त’ त्यसै पनि बुझाइदिनुपर्छ।
कनोडियाले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’मा प्रतिष्ठाको विषय बनाएनन्, बरू चुनावी अभियानमा यसरी खटिए कि आफ्ना उम्मेदवारलाई उनले सानदार मतले विजयी बनाए।
चुनावी माहोल अन्तिम चरणमा थियो, सरगर्मी उत्तिकै बढेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा थिए। एकै दिन कोशौ टाढाका फरक-फरक सहरमा तीन चारवटा सम्म चुनावी सभाहरूमा नेताहरूले भाषण गर्नुपर्थ्यो।
बैशाख २५गते पोखरा अनि दाङको घोराही र तुलसीपुरमा चुनावी आमसभा थियो। सबैमा देउवाको भाषण पनि थियो।
नेपालगन्जबाट दाङको तुलसीपुर पुगेर उनले देउवालाई नेपालगन्ज उप महानगरपालिकाको चुनावी तयारी तथा गठबन्धनको विषयमा ‘क्वीक रिपोर्टिङ’ गरे नेपाली कांग्रेस नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका निर्वाचन परिचालन तथा सचिवालय समितिका संयोजक डा.सुरेश कुमार कनोडियाले।
पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता, क्षेत्र, प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रको नेतृत्वसँग संयोजन समेत गरे। चुनावी अभियानमा जिल्ला तहका नेताहरुसँग ग्राउण्डको अवस्था बारे छलफल भेट र ‘मुभमेन्ट’ तेज बनाउन संयोजक डा.कनोडिया निरन्तर लागिरहे।
चुनाव अवधिमा उनलाई हिँडडुल गर्न समस्या थियो। स्वास्थ्यमा समस्या भएपनि डा. कनोडिया चुनावी फिल्डिङ्गमा उपमहानगरको बाउण्ड्रीमा कुदि नै रहे। थाकेनन्। मतदान सकिएपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको लखनउ गए। मतगणना भइरहँदा फर्किसकेका थिए।
२०७४मा मेयरमा कांग्रेसले डा.कनोडियालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उनको त्यही चुनावी अनुभव यतिबेला प्रशन्त विष्ट सहित गठबन्धनलाई जिताउनमा फलदायी भयो।
नेता कार्यकर्ता ब्यवस्थापन सहित चुनावी कार्यक्रम तयारी र सर्कुलेशनमा उनको सक्रियताले उपमहानगर चुनावी अभियान सफल भयो। र्‌याली होस् वा सभा, घरदैलो होस वा सामूहिक भेटघाट उनका हरेक खालका चुनवी रणनीति परिणाममुखि हुँदै गए।
मौन अवधिमा मतदाता रुझानको क्याल्कुलेसनमा लागे। नेपालगन्जको मतदानको परम्परा खोतले अनि गठबन्धनमा मतदान गर्दा मत बदर हुनसक्ने विषयमा घोत्लिदैं मेयरका लागि २३ हजार भन्दा धेरै मत आउने निष्कर्ष निकाले। नभन्दै २३ हजार ४६० मत ल्याएर बिष्ट नेपालगन्ज उपमहानगरको मेयर भए।
संयोजक डा.कनोडियाले उपमहानगरका ३४ बुथ केन्द्रमा पुगेर मतदानको अवस्था र कार्यकर्ताको परिचालन समेत गरेका थिए।
गठबन्धनबाट प्रमुखका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट र उप प्रमुखका उम्मेद्वार कमरुद्दिन राईलाई सँगै भोट माग्न हिँडाउनेदेखि वडा तहमा परिआएका समस्यालाई जति सक्यो छिटो सल्टाउँदै चुनवी रथ हाँकेका डा= कनोडिया चुनाव लक्षित योजनाका कुशल कमाण्डर सावित भए।
नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेका डा. कनोडियाले केन्द्र, प्रेदेश, जिल्ला र वडा तहका नेता तथा कार्यकर्ता र मतदाताबीच ‘साँघु’को भुमिका पनि निभाए।
उनी भन्छन्, झै सोचेजस्तो धेरै वडा जिताउन चुक्यौं तर पनि मेयर उपमहानगरको नेतृत्वमा स्थापित हुँदैगर्दा सन्तोष लागेको छ।’
उपलब्ध श्रोत साधनको उपयुक्त परिचाल गर्ने खुवीले गर्दा उनको संयोजनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चुनावी अभियान सफल बनाउने सफलता हात लाग्यो।
चुनावी प्रचारप्रसार अभियानमा गठबन्धनलाई कसरी मत खसाल्ने भन्ने विषयलाई मजवुतिका साथ अघि बढाउनमा उनको योजनाले सफलता पायो।
अघिल्लो पटक उनि आँफै उम्मेद्वार रहेकाले पनि सुक्ष्म रुपमा चुनावी जोडघटाउमा उनका योजना फलदायी हुन पुगे।
वडा-वडामा गठबन्धन नभए पनि डा.कनोडिया वडा अध्यक्ष र प्रमुख अनि उप-प्रमुख जिताउने ‘टेक्निकल स्ट्रयाटेजी’ बनाउनमा निरन्तर लागे।
यतिबेला उनले बनाएका योजना र उनको संयोजनले रङ्ग ल्यायो जब नेपालगन्जमा गठबन्धनका दुबै उम्मेद्वार विजयी भए।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ७४.८२ प्रतिशत मत खस्यो। अर्थात ८१ हजार ७सय ९४ मतदाताले रहेकोमा ६१ हजार २ सय ५ ले मतदान गरे। यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरमा मतदाताको संख्या ६२ हजार ५१७ थियो।
८ पालिका रहेको बाँकेमा यसपालि नेपाली कांग्रेसले मात्रै ६ पालिकाको नेतृत्वमा विजय हासिल गर्‌यो। बाँकी दुई पालिकामा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र आए। एमाले पालिकाको नेतृत्वमा नील भयो।